Sida loo helo marin xidid ee LG GW620 | Androidsis
antocara | | Xididka Android, LG, Tababarada
El Lg GW620 waa a Xarunta Android oo leh faa'iidooyin la aqbali karo oo aan leenahay si joogto ah loogu hadlay, maanta waxaan isku dayi doonaa abuuro marin xidid LG GW620. Wixii hel marinkan xididka ah waxaan u baahanahay inaan helno Android SDK hoos loo dhigay oo la rakibay. Tan iyo markii androidsis Annaga mas'uul kama nihin waxyeelada suurtagalka ah ee laga yaabo inay ku timaado terminal-ka iyo buug-gacmeedkan waxaa laga soo qaatay bogagga clublgmobile.
1.- Waa inaan kala soo baxnaa feylkaan oo aan ka siibnaa gudaha galka qalabka SDK
2. - Terminal-ka waxaan ka shaqeysiineynaa ikhtiyaarka ah "habka wax-u-debcinta" ee laga heli karo MENU-SETTINGS-APPLICATIONS-Development
3. - Terminaalka waxaan ku qoreynaa 3845 # * 620 # oo aan marin u helaynaa liiska adeegga
4.- Guji "Module Test" ka dibna "Stability Test" ugu dambaynti "Fududee rukhsadda ruqsadda"
5.- Laga soo bilaabo fadhiga terminal waxaan tagnaa galka SDK halkaasna ayaan ku qornaa adb Shell oo waxaan riixnaa gal
6.- Hadda # waa inuu ka muuqdaa shaashadda, haddii $ u muuqdo, waa inaan dib u bilownaa, dib u bilownaa kombuyuutarka iyo terminaalka
7.- Haddii # uu ka soo muuqday shaashadda, waanu qornay bixitaanka oo waxaan riixnaa gal.
8.- Waxaan qori ka saarida adb oo waxaan riixnaa gal.
9.- Waxaan qori adb shell cat / system / xbin / su > /system/xbin/su.original oo ku dhufo galaan
10.- Waxaan qori adb riix superuser / bin / su / system / xbin / su oo ku dhufo galaan
11.- Waxaan qori adb riix superuser / bin / su / system / bin / su oo ku dhufo galaan
12.- Waxaan qori adb shell chmod 4755 / nidaam / xbin / su oo ku dhufo galaan
13.- Waxaan qori adb shell chmod 4755 / system / bin / su oo ku dhufo galaan
14.- Waxaan qori adb rakibi -r superuser / bin / Superuser.apk oo ku dhufo galaan
Tan waxaan ku heli doonnaa helitaan xidid weligiis.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » Sida loo helo helitaanka xididka LG GW620
Dad badan dijo
Hagaag, markaan gaaro menu-ka oo aan gujiyo "Enable Roy Permission", waxba iima qabanayso, oo markaan soo galo cmd oo aan qoro adb Shell, waxaan hela amarro badan oo aan ku dari karo. Waxaan ogaaday inaan helayo # halkii laga heli lahaa $ ... taasi waa Linux, sax? Waxaan u idhi maxaa yeelay waxaan ku tijaabiyaa daaqadaha, wax shaqo ah kuma laha?
Waad ku mahadsantahay horay, salaan
SAAXIIB SIDEE AYAAN U BAARAA HADII AAN SI DHAQAN AH U LAHAY HELITAANKA
hi waan dhibaato qabaa markaan qoro "adb shell cat / system / xbin / su> /system/xbin/su.original"
oo garaac galaan waxay ii sheegaysaa "marin loo diiday" ...
waxaa laga yaabaa inaan ku qasbanaado (ama gab) wax ku jira cel? Ma aqaan sida loo saxo
Salaam sidee wax yihiin; Waxaan hayaa Gw620 V10A; Waxaan sameeyaa tallaabo kasta; laakiin CMD; Waxaan galiyaa cinwaanka aaladda SDK; iyo markaan siiyo ADB Shell; Wuxuu ii soo diraa: Qalab qalad ah lama helin…. Qof ma i caawin karaa?
EY HADDII AAD QORTO UGU YAR YAR SHAQO SI AAD SHAQO UGU SAMEATO
Ku jawaab K
4.- Guji "Module Test" ka dibna "Stability Test" iyo ugu dambeyn "Enable Rogin Permission", tillaabadan waxay i weydiineysaa lambar sir ah, ma jiraa qof garanaya midka aan galayo?
Ku jawaab patton
Bar magacaaga ... dijo
baaska waa EVE & ADAM && 620JACAYL!
Jawaab ku qor magacaaga ...
Shaqada Cardenas dijo
Ma fahmin sida looga soo qaatay fadhigii garoonka?
Ku jawaab Job Cárdenas
kaararka shaqada dijo
Laga soo bilaabo fadhiga terminal waxaan aadeynaa galka tolos ee SDK halkaasna waxaan ku qoreynaa adb Shell oo waxaan ku riixnaa gal. Sideen ku sameeyaa tan?
Ku jawaab kaadhka shaqada
Furaha sirta ah ee ay ku weydiisanayso? xididka awood u siinaya? Wali ma aanan badalin erayga sirta ah ee warshada, waa maxay?
Ku jawaab si aad fer
Waad salaaman tahay dhibaato ayaan qabaa, markii aan dhigo 3845 # * 620 # oo aan galo liiska adeegga
Waxaan ku riixayaa "Module Test" ka dibna "Stability Test" iyo ugu dambeyn "Enable Roy Permission" laakiin kan dambe ayaa wali ah sidii sidii oo aanan anigu siinin. Kaalay, xitaa uma soo baxdo inay galaan lambarka sirta mana iga dhigayaan OK.
Haddii qof ogyahay waxa dhici kara, i caawi, waan quusanayaa! Waxaan isku dayay inaan cusbooneysiiyo mobilada muddo bil ah.
Waa salaaman tahay, waxaan u baahanahay inaan xidido, sidee baan u qaban karaa, fadlan, ama sidee ugu celin karaa siday ahayd ka hor inta aan rakibidda nooca aad sheegeyso?
Buugga cuntada, 2.500 cunto karinta ku saabsan Android-kaaga
Dhegayso RAC1 on your android